Rano maloto , diky miparitaka Manimba ny fahasalamana, mamono ireo ankizy latsaky ny 5 taona
Ny 60 %-n’ny vatan’ireo ankizy latsaky ny dimy taona dia rano avokoa no mbola mandrafitra azy.
Raha vao tratry ny aretim-pivalanana nateraky ny mikraoba tamin’ny tanana na entin’ny lalitra vokatry ny diky miparitaka izy ireny dia zary very rano ka raha tsy voavonjy haingana dia mety hafoy hatramin’ny ainy. Anisan’ny antony hivorian’ireo tompon’andraikitra eny ifotony teny amin’ny le pavé Antaninarenina ny fitadiavam-bahaolana mifandraika amin’izany, omaly, notronin’ny WSUP sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Nivoitra nandritra izany ny fametrahana fotodrafitrasa momba ny fanadiovana sy ny fidiovana ka anisan’ireny ny trano fivoahana, ny paompy fanovozana rano fisotro madio…. Tanjon’ny rehetra ny hahafahan’ny mponina miaina anaty tontolo madio lavitry ny aretina, indrindra amin’izao taon-jato faha-21 izao. Nomarihin’ireo tompon’andraikitra nanome fanazavana omaly moa fa anisan’ny antony miteraka ny fahafatesan’ny zaza latsaky ny dimy taona eto amintsika ny aretin-kibo ka ilana fandraisana andraikitra haingana ny ady hatao amin’ny loto.